Luka Asɛmpa 18:1-43
Okunafo a wampa abaw no ho mfatoho no (1-8)
Farisini ne obi a ogyigye tow (9-14)
Yesu ne mmofra no (15-17)
Otumfo sikani bi bisaa no asɛm (18-30)
Yesu kaa ne wu ho asɛm bio (31-34)
Onifuraefo bi a ɔsrɛsrɛ ade huu ade (35-43)
18 Afei ɔtoaa so maa wɔn mfatoho bi de kyerɛe sɛ, ehia sɛ wɔbɔ mpae daa a wɔmpa abaw.+ 2 Ɔkae sɛ: “Ná ɔtemmufo bi wɔ kurow bi mu. Ná onsuro Onyankopɔn, na na ommu nnipa. 3 Ná ɔbea kunafo bi nso wɔ kurow no mu, na na ɔtaa kɔ ɔtemmufo no nkyɛn kɔka kyerɛ no sɛ, ‘Hwɛ bu atɛntrenee ma me wɔ nea me ne no anya asɛm no ntam.’ 4 Ɔtemmufo no twentwɛn ne nan ase kyɛe, nanso akyiri yi, ɔkae wɔ ne tirim sɛ, ‘Ɛwom sɛ minsuro Onyankopɔn, na mimmu onipa biara de, 5 nanso, sɛnea ɔbea kunafo yi kɔ so haw me nti, mɛhwɛ ama wanya atɛntrenee, na wankɔ so amfa n’asɛm ammeguan me ho.’”+ 6 Afei Awurade kae sɛ: “Muntie nea ɔtemmufo a ɔnteɛ no mpo kae! 7 Ɛwom sɛ Onyankopɔn tɔ ne bo ase+ de, nanso munnye nni sɛ obebu atɛntrenee ama wɔn a wapaw wɔn a wosu frɛ no awia ne anadwo+ no anaa? 8 Mereka akyerɛ mo sɛ, obebu atɛntrenee ama wɔn ntɛm. Nanso sɛ onipa Ba no ba a, obehu gyidi a ɛte saa* wɔ asaase so ampa?” 9 Afei, ebinom a na wogye wɔn ho di sɛ wɔyɛ atreneefo a na wɔmfa nnipa a aka nyɛ hwee no, ɔmaa wɔn mfatoho yi: 10 “Mmarima baanu kɔɔ asɔrefi hɔ kɔbɔɔ mpae; ɔbaako yɛ Farisini, ɛnna ɔbaako nso gyigye tow. 11 Farisini no sɔre gyinae, na ofii ase bɔɔ mpae yi wɔ ne tirim sɛ, ‘O Onyankopɔn, meda wo ase sɛ mente sɛ nnipa a aka no, asisifo,* wɔn a wɔnteɛ, awaresɛefo, anaa nea ogyigye tow yi mpo. 12 Nnawɔtwe biara meyɛ akɔnkyen* mprenu, na biribiara a minya no, miyi so ntotoso du du.’+ 13 Na nea ogyigye tow no de, okogyinaa akyirikyiri, na wampɛ sɛ ɔma ne ti so hwɛ soro mpo. Na mmom, ɔbobɔɔ ne koko mpɛn pii kae sɛ, ‘O Onyankopɔn, hu me mmɔbɔ, na meyɛ ɔdebɔneyɛfo.’+ 14 Mereka akyerɛ mo sɛ, bere a ɔbarima yi kɔɔ ne fi no, Onyankopɔn buu no ɔtreneeni sen Farisini no.+ Efisɛ obiara a ɔma ne ho so no, wɔbɛbrɛ no ase, na obiara a ɔbrɛ ne ho ase no, wɔbɛma no so.”+ 15 Afei nkurɔfo de wɔn mma nketewa brɛɛ no sɛ ɔmfa ne nsa nka wɔn,* nanso bere a n’asuafo no hui no, wofii ase kaa wɔn anim.+ 16 Nanso, Yesu frɛɛ mmofra no baa ne nkyɛn, na ɔkae sɛ: “Momma mmofra nkumaa no mmra me nkyɛn, na munnsiw wɔn kwan, efisɛ wɔn a wɔte saa na Onyankopɔn Ahenni no yɛ wɔn dea.+ 17 Nokwarem mereka akyerɛ mo sɛ, obiara a onnye Onyankopɔn Ahenni te sɛ abofra kumaa no, ɔrenkɔ mu da.”+ 18 Na atumfo no baako bisaa no sɛ: “Ɔkyerɛkyerɛfo Pa, dɛn na menyɛ na manya daa nkwa?”+ 19 Ɛnna Yesu ka kyerɛɛ no sɛ: “Adɛn nti na wofrɛ me papa? Obiara nyɛ papa gye ɔbaako pɛ; ɔno ne Onyankopɔn.+ 20 Wunim mmara no: ‘Nsɛe aware,+ nni awu,+ mmɔ korɔn,+ nni adanse a ɛnyɛ nokware,*+ di wo papa ne wo maame ni.’”+ 21 Ɛnna ɔkae sɛ: “Madi eyinom nyinaa so fi me mmofraase.” 22 Bere a Yesu tee nea ɔkae no, ɔka kyerɛɛ no sɛ: “Aka wo ade baako: Tɔn nea wowɔ nyinaa, na kyekyɛ nea wubenya no ma ahiafo, na wubenya agyapade wɔ soro; na bra bedi m’akyi.”+ 23 Bere a ɔtee eyi no, ne werɛ howee paa, efisɛ na ɔwɔ sika bebree.+ 24 Yesu hwɛɛ no, na ɔkae sɛ: “Monhwɛ sɛnea ɛyɛ den sɛ asikafo bɛkɔ Onyankopɔn Ahenni mu!+ 25 Nokwarem no, ɛyɛ mmerɛw sɛ yoma bɛfa paane a wɔde pam ade aniwa mu sen sɛ osikani bɛkɔ Onyankopɔn Ahenni mu.”+ 26 Wɔn a wɔtee eyi no kae sɛ: “Ɛnde, hena paa na wobetumi agye no nkwa?”+ 27 Ɔkae sɛ: “Nea ɛrentumi nyɛ yiye wɔ nnipa fam no, Onyankopɔn fam de, ebetumi ayɛ yiye.”+ 28 Na Petro kae sɛ: “Hwɛ! Yɛagyaw yɛn nneɛma hɔ abedi w’akyi.”+ 29 Ɔka kyerɛɛ wɔn sɛ: “Nokwarem mereka akyerɛ mo sɛ, obiara nni hɔ a wagyaw ɔdan anaa ɔyere anaa nua mmarima anaa awofo anaa mma, Onyankopɔn Ahenni nti,+ 30 a ɔrennya no mmɔho pii saa bere yi, ne daa nkwa wɔ wiase* a ɛreba no mu.”+ 31 Afei ɔde Dumien no kɔɔ nkyɛn, na ɔka kyerɛɛ wɔn sɛ: “Hwɛ! Yɛreforo akɔ Yerusalem, na nea wɔnam adiyifo no so akyerɛw afa onipa Ba no ho nyinaa bɛba mu.+ 32 Ebi ne sɛ, wobeyi no ama amanaman mufo+ ama wɔadi ne ho agoru,+ na wɔayeyaw no, na wɔatetew ntasu agu no so.+ 33 Na sɛ wɔbɔ no mmaa wie a, wobekum no,+ na da a ɛto so abiɛsa no, obenyan.”+ 34 Nanso, wɔanhu nea nneɛma yi mu biara kyerɛ, efisɛ na wɔde nsɛm yi asie wɔn, na wɔante asɛm a Yesu kae no ase. 35 Na bere a Yesu rebɛn Yeriko no, na onifuraefo bi te kwankyɛn resrɛsrɛ ade.+ 36 Ɔtee sɛ nnipadɔm bi retwam, enti ofii ase bisaa nea ɛrekɔ so. 37 Wɔka kyerɛɛ no sɛ: “Yesu, Nasaretni no na ɔretwam!” 38 Ɛnna ɔteɛɛm sɛ: “Yesu, Dawid Ba, hu me mmɔbɔ!” 39 Na wɔn a wodi anim no teɛteɛɛ no sɛ ɔnyɛ komm, nanso afei koraa na ɔteɛteɛɛm kɛse sɛ: “Dawid Ba, hu me mmɔbɔ!” 40 Afei Yesu gyinae, na ɔkae sɛ wɔmfa ɔbarima no mmrɛ no. Bere a oduu Yesu nkyɛn no, Yesu bisaa no sɛ: 41 “Dɛn na wopɛ sɛ meyɛ ma wo?” Ɔkae sɛ: “Awurade, ma minhu ade.” 42 Enti Yesu ka kyerɛɛ no sɛ: “Hu ade; wo gyidi ama wo ho atɔ wo.”+ 43 Ɛhɔ ara na ohuu ade, na ofii ase dii n’akyi,+ na ɔhyɛɛ Onyankopɔn anuonyam. Afei nso, bere a nkurɔfo no nyinaa hui no, woyii Onyankopɔn ayɛ.+
^ Anaa “gyidi yi.” Nt., “gyidi no.”
^ Anaa “apoobɔfo.”
^ Anaa “midi mmuada.”